Alexander Yakovlev izilaleli ingoma "Ngo ingubo emhlophe-white-January," "uthole esikoleni", "Uyazi, wazi ...". Baye bavumela ukuqala umculi career kanye umkhiqizi umculi onekhono. Ngaphandle imisebenzi ukucula, umculi unesithakazelo karting, itafula lokubhukuda, lihlotshaniswa ibhizinisi yamahhashi. Mashi 2016 kwasungulwa iphrojekthi entsha - umculi isiqophi ibhulogi 'iNdlela, "lapho umculi abelana impahla yakhe ocebile nakho abadlali imfundamakhwela.
Alexander igubha usuku lokuzalwa yayo ku 24 Mashi. Wazalwa ngo-1978 e Kazan. Esengumfana ehilelekile esikoleni umculo Conservatory ngezinga e upiyano. Wathatha izifundo kusukela Mikhail Pletnev, uye wahlanganyela imincintiswano eminingi, wayengumuntu winner futhi winner iminyaka yokweva eshumini nambili. Lapho efunda esikoleni esiphakeme, ngathenga synthesizer futhi aqaphela ukuthi umculo ungabhala hhayi kuphela ephepheni kodwa futhi ezinomsindo, ngentokozo. Ngakho nganquma ukuba umdlali ethandwa.
Kwathatha iminyaka engu-, kodwa umphumela kuwufanele. Lolu shintsho lwaqala ngesikhathi iqhaza noma iqembu elithile "Ububele Meyi". Alexander waphonsa Kazan, wathuthela eMoscow yangena shí ukucula umsebenzi. Umsebenzi eqenjini akuzange kuhlale isikhathi eside futhi saphela ngokukhululwa ukulahlekelwa izilinganiso sokugcina. Khona-ke u-Alexander Yakovlev - ngumculi, biography, izithombe, kanye nempilo yakho lapho useqalile ukubangela isithakazelo abafundi abaningi, uye udale iphrojekthi ebizwa ngokuthi "Sweet Dream". amashadi Abaningi waduma ingoma "On the bedspread elimhlophe-white ngoJanuwari."
Ngemva kwesikhathi esithile obhekele ukhathele ukusebenza kuleli qembu, futhi wawisa iphrojekthi. ukuhoxiswa kwengxenye kwaqondana nge yokujama tsi siqu lokudala futhi esibucayi sezomnotho ezweni. sekudlule isikhathi. Alexander wadala isikhungo ukukhiqizwa futhi yokuqophela, okuyinto isinyathelo futhi okwamanje, ekusizeni ithalente abasha, lapho umculi abone lokho esinamandla okukwenza wentuthuko.
Ukudala kanye imivuzo
Alexander Yakovlev uqhosha kokuba classic imfundo. Eminyakeni 4 wayehileleka uMnyango wokulungiselela lesikole umculo we Kazan Conservatory. Ngemva kweminyaka engu-10, waphothula izifundo zakhe futhi ngathola iziqu, edlala nopiyano. Kulokhu, a classic umculi umsebenzi umphefumulo akaqambi amanga, futhi udumo nokuduma uthanda.
Aleksandra Yakovleva umsebenzi zomculo baqala ukwanda ngo-2007. Lolu shintsho lwaqala ngesikhathi ingoma ethandwa, "Uyazi, wazi ...", okuyinto wathandwa esters zomsakazo ehola eMoscow: "Hit-FM» futhi «Russian Radio". Ngaphambi lokhu round ukuthandwa kwaba ingoma cheeky "Thola School", intandokazi yabo bonke abathole iziqu kanye baba liculo we iziqu engamenyezelwe.
Januwari 2008 amehlo emhlabeni wonke ukuba umculi ngemuva ukubonakala ingoma "Ningayi." Kungenxa wakhe lowo nyaka wathola umklomelo "Golden Gramophone". umsebenzi wakamuva "Ngo amabhuloho Dying" futhi " 'ukhulelwe evuthayo isithakazelo abalandeli lokusungula avela kuye lo oculayo.
Aleksandr Yakovlev ushadile futhi unendodana nendodakazi. Izimpilo umndeni kanye cat omnyama nomhlophe Pitti, ohambisa kuye emsebenzini. Ngaphezu imisebenzi umkhiqizi nokuhlabelela umsebenzi, yena unesithakazelo karting, ekade ikhwela kulo nelifakwe izinhlobo ezahlukene izimoto. Ngavula ibhizinisi ahlobene epaki omkhulu eMoscow ngombhangqwana nomngane.
Kart Craze abezile kusukela ebuntwaneni. Wayengase weqa ngisho amakilasi esikoleni ukugibela ubumnandi. Inzuzo ye-club esendlini, lapho umculi wayehlala nomkhaya wakubo. Karting kanye umculo uye waba omunye izithakazelo oyinhloko ukuphila kwabo konke. Bambalwa abantu bazi, kodwa Alexander Yakovlev ungumpetha yezemidlalo umgwaqo omkhulu indandatho izinhlanga. Njalo ngeviki ngoLwezihlanu at kartodrome umlingisi ungabona mncintiswano ngokwedlulele.
Alexander Yakovlev - Umculi, ogama discography kuhlanganisa imisebenzi eminingana emangalisayo. Enye yezintambo zokugcina - CD "Afe On The Bridge" ngeculo entsha igama elifanayo. It kungenziwa ngokuthi ethandwa kakhulu umculi iculo: "Ningayi", "On the ingubo emhlophe-white-January," 'Uyazi, wazi ... "" Ngiyahamba phakade, ""' ukhulelwe, bathi: "Susa" "uthole esikoleni". Abalandeli ngabomvu izingoma ezintsha nemibono zokudala.
Alexander Yakovlev - Umculi, ogama biography ligcwele amaphrojekthi amaningi. Phakathi kwabo, asanda ohlangothini olusha - ". Indlela umculi" ukugcina isiqophi ibhulogi Emakhasini zokuxhumana, ungagcina ithrekhi ukukhishwa okusha. Manje kukhona ezintathu. Ngayinye yembula facets ezithile zomsebenzi umculi umsebenzi futhi umculi Wabasaqalayo kule bhizinisi. Alexander abelana nakho kwakhe, ukunikeza izeluleko kanye nezincomo, lixwayisa amaphutha ukuthi uma wazenzela ekuqaleni ekwakheni amathuba omsebenzi.
Alexander Yakovlev uhlala ngokuhambisana nesiqubulo zishukumise kakhulu: "Asikho isikhathi ukuma bese ulinda, sidinga ukuba siqhubekele phambili," La mazwi agcwele ngokugcwele umsebenzi wayo, nobuciko kanye intshiseko. Lo mculi akusho miss ithuba uthole esiphezulu aphume empilweni, sifuna ukuphila njalo ngeminithi ngemizwelo elikhanyayo, ukwabelana baye bathola okuhlangenwe nakho nosizo Wabasaqalayo ngokusebenzisa isikhungo ukukhiqiza.
The best Soviet impi amafilimu: ohlwini. "Ngiya ukulwa abanye" ubudala. "Uyachaza," Amasosha amabili. "" Allegro umlilo "
"Genferon Khanyisa" (spray): yokusetshenziswa, ngempela